बुद्ध एयरको जहाज खरानी हुनबाट बच्यो, के हो घटना ? — Imandarmedia.com
बुद्ध एयरको जहाज खरानी हुनबाट बच्यो, के हो घटना ?
काठमाडौं। बुद्ध एयर लगायतको जहाजमा पछिल्लो समय गडबढी आएका समाचारहरु त यहाले सुन्नु, पढ्नु भएकै होला। तर यात्रुको गल्तीले जहाज नै खरानी हुनबाट जोगिएको खबर सार्वजनिक भएको छ।
उडिरहेको जहाजभित्र चुरोट सल्काएको आरोपमा एक यात्रु पक्राउ परेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जाँच प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। हवाई जहाजमा यात्रा गर्दा सलाइ–लाइटर जस्ता आगो बाल्ने सामान यात्रुले बोक्न पाइँदैन।
निषेधित वस्तुको सूचीमा सुरुमै पर्ने वस्तु कसैले नबोकोस् भनेरै चेकिङ कडा हुन्छ। काठमाडौंबाट शुक्रबार साँझ भद्रपुर गएको एउटा जहाजमा उडानकै क्रममा यात्रुले भित्रै चुरोट सल्काएको, उनको लाइटर खसेर आफ्नै पाइन्टमा आगोको झिल्कोले भेटेको खुलेको छ।
विमान अवतरण लगत्तै ती यात्रुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन्। भद्रपुर विमानस्थलले घटनाको पुष्टि गरेको छ। विमानस्थल प्रमुख मुराहरि पौडेलका अनुसार,
बुद्ध एयरको नाइन एन–एएनएफ कलसाइन ९५७ उडानमा सवार यात्रुलाई पक्राउ गरिएको हो। एकजना यात्रुले जहाजभित्रै धुम्रपान गर्ने क्रममा आफ्नो पेन्ट पनि केही जलेको खुल्यो।
उहाँको मानसिक अवस्था ठिक नभएको शंका छ। उनले भने, थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ। हवाई यातायात सेवा लिने क्रममा सलाइ, लाइटर लगायतका वस्तु बोक्न पाइदैनयो घटनाम गम्भीर लापरबाही देखिएको छ।
उनका अनुसार सामान्यतः हवाई रुट चार प्रकारका हुन्छन् । कन्ट्रोल (एयर वे) रुट, अनकन्ट्रोल रुट र टर्मिनल रुट पर्दछन्। कन्ट्रोल रुट ११ हजार ५ सय फिटभन्दा माथिको उचाइमा हुन्छ। यो रुटमा उडिरहेको विमान पूर्ण रुपमा एटीसीको नियन्त्रणमा हुन्छ। अनकन्ट्रोल रुटमा भने एटीसीको कुनै नियन्त्रण हुँदैन।